SUSE Linux inotengeswa nemadhora mazana maviri nemazana maviri emadhora kuboka rekuSweden rekudyara | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yemakambani ekare eFree Software, SUSE Linux, yakatengeswa kune boka reSweden rekudyara nemari inosvika zviuru mazana maviri nemazana mashanu emamiriyoni, anenge. Uku kutengesa kwakashamisa munhu wese muFree Software Community, kunyangwe vamiriri vemapato ese ari maviri pakutengesa nekutenga vanovimbisa kuti mashandiro eSUSE Linux acharamba akafanana uye kuti kutenga uku kunovimbisa ramangwana reSUSE Linux sekambani.
Iri boka rekudyara rinonzi EQT Partner, weSweden mavambo uye anofarira Mahara Software uye ayo angangoitika mikana, ndosaka kufarira kwake kutenga iyi kambani.SUSE Linux parizvino ine vashandi chiuru nemazana mana, inopararira pasi rese uye iri, kwenguva yakati rebei, semuenzaniso iyo Yemahara Software inogona kubatsira kunyangwe software yacho iri yemahara, zvakapesana chaizvo nemuenzaniso waMicrosoft.
Mumakore mashoma apfuura, SUSE Linux yanga iri yakatsaurirwa kune bhizinesi renyika uye inopa gore masevhisi, asi ichokwadi kuti mumwedzi ichangopfuura SUSE Linux yanga isiri nzvimbo yemahara Software software, ichitarisa kufarira uku kune mamwe mapuratifomu kana makambani akadai seCanonical. Nekudaro, vazhinji veSUSE Linux vashandi vanoona iko kutenga netarisiro sezvo iro boka rekudyara richizobvumidza kambani kuongorora uye kunatsiridza masevhisi ako mumisika dzinozivikanwa senge gore kana musika weIoT.
Kune rimwe divi, Richard Brown, mutungamiri weOpenSUSE, anotsigira kuti kutenga kwakadaro hakukanganisi yemahara vhezheni yeSUSE, ndokuti OpenSUSE, hapana chakaipa asi chakapesana chaizvo uye icho kumhanya kweOpenSUSE kucharamba kwakafanana, kunyangwe nekutenga. Chimwe chinhu chinoita senge chakajairika kwatiri nekuti, kunyangwe hazvo iyo SUSE Linux iri mushambadzi mukuru weOpenSUSE, ndiyo Nharaunda yeOpenSUSE inosarudza iro ramangwana rekugovera.
Izvo zvakanaka zvekutenga uku ndezvekuti zvinoratidzwa kuti Mahara Software inopa zvakafanana kana zvinopfuura zvakavanzika Software, asi zvakashata ndezvekuti zvinogona kutanga chinozunguzirwa chekutenga Mahara Software mapurojekiti ayo pakupedzisira anodzivirira kana kutadzisa Mahara Software mapurojekiti Unofungei? Iwe unofungei nezve kutenga uku?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SUSE Linux inotengeswa nemadhora mazana maviri nemazana maviri emadhora kuboka rekudyara reSweden
Mabhirioni anobva kuUS :)
2.500 bhiriyoni haisi 2,5 trillion, iyo yekupedzisira inopenga.
2.500 bhiriyoni = 2 bhiriyoni
2,5 tiririyoni = 2
Mhoro, kutanga kwezvose, ndinokutendai zvikuru nekutiverenga. Kechipiri, maita basa nekujekeswa, asi ini ndinofunga zvakanaka. Chokwadi, tiririyoni miriyoni imwe, asi kune dhora, chinoshandiswa ndicho United States, ndiko kuti, bhiriyoni rimwe. Kana iwe ukaverenga gare gare iwe uchaona mashandurudzo andinoita maeuro uyezve kana ini ndikatevera iyo European system.
Zvikwereti, uye ndinokutendai zvikuru.
Zvamunotaura hazvina kunaka. Bilion senge zvinotaurwa nemaAmerican 10 ^ 9 zvisinei nekuti vanoverenga madhora kana maatomu ecarbon. :-)
Around pano, tinoti trillion kusvika 10 ^ 12 zvisinei nezvatinoverenga.
Mhoroi, kana vatyairi ava vachiramba vachichengeta sezvazviri kana kuvandudza zviripo, zvakanaka, zvinofanirwa kutaurwa kuti muna 2017 Huawei pachayo yakachinja redhat uye windows maseva kuSuse, uye nemari iyi nyowani nyowani, rarama kwenguva refu Suse uye mudiwa wangu Opensuse , kunyangwe iniwo ndichishandisa Fedora, kwandiri kwandiri maviri angu akakosha zvikuru kugovera